Iminyaka emibili…. | Scrolla Izindaba
Ophethe kwi-WHO, uTedros Adhanom Ghebreyesus wase-Ethiopia, uthe kungase kusheshe kunalokho futhi, ngenxa yentuthuko kwezobuchwepheshe, kubika abezindaba i-BBC.
Leli gciwane selibulale abantu abacishe babe yi-800,000 futhi lithelele abantu abacishe babe yizigidi ezingama-23.
Esithangamini nabezindaba e-Geneva, uGhebreyesus ebuzwa ngenkohlakalo yama-PPE eNingizimu Afrika.
“Inkohliso ehlobene nama-PPE … kimi empeleni ifana nokubulala. Ngoba uma abasebenzi bezempilo besebenza ngaphandle kwama-PPE, sibeka izimpilo zabo engcupheni. Futhi lokho kubeka engcupheni izimpilo zabantu abazisebenzelayo. “
I-BBC yaphawula ukuthi yize bekukhulunywe ngeNingizimu Afrika yodwa, izinkinga ezifanayo zikhona nakwamanye amazwe. E-Kenya kube nemibhikisho kuleli sonto mayelana nenkohlakalo ngesikhathi sodlame.
EBrithani, kukhona amahlazo avelile mayelana nezinqubo zethenda yama-PPE.